Ny fanatanjahan-tena dia tsy fanatanjahan-tena fotsiny, fa fomba tsara ahafahana miala sasatra sy mitazona ny vatana. Raha toa ka tsy afaka milomano ao amin'ny toeram-ponenana misokatra, dia ny dobo filomanosana ho azy ireo ny fiantohana azy tsara. Saingy alohan'ny hividiananao famandrihana, mila mianatra ny fitsipika fototra momba ny fitondran-tena ao amin'ny dobo.
Alohan'ny fitsidihana voalohany dia tokony hianatra ny fitsipika momba ny fampiasana ny dobo, izay tokony ho hita amin'ny fotoana rehetra. Rehefa manomana milomano, dia tokony hohadino fa ny sakafo farany tokony ho 40-50 minitra farafahakeliny alohan'ny handehanana any amin'ny dobo. Ataovy azo antoka koa fa naka ny zavatra ilaina rehetra mifanaraka amin'ny fitsipiky ny maha ao anaty dobo filaminana ianao:
kapa ho an'ny dobo ;
Fanamboaran-tsakafo ho an'ny orana;
Kofehy manokana ho an'ny dobo (fingotra vita amin'ny fingotra na trano fandroana fandroana).
Ny fitsipika momba ny fiarovana ao amin'ny dobo koa dia tokony ho raisina an-tsakany. Raha tsy fantatrao ny fomba hilomano, dia mila ampahafantarinao ilay mpanazatra momba ny fanatanjahan-tena izay hanome anao manokana fitaovam-pamboazana na fanampiana manokana amin'ny fampiofanana. Amin'ny fitsipika rehetra momba ny milomano ao anaty dobo filomanosana Voalaza fa tsy afaka ny hampiofanina ianao, ary tsy tokony haka fialan-tsasatra mandritra ny fotoam-pivoriana ianao, izay mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamanao, fa koa amin'ny endrika.
Fitsipika momba ny fahadiovana ho an'ny dobo
Ao amin'ny kilasin'ny lomano, ny fitsipika momba ny fandroana amin'ny dobo filomanosana dia tokony ho hita ihany koa. Voalohany indrindra, raha ny fahafahana mitsidika ny dobo, ilaina ny manolotra ny fehin'ny dokotera fa efa nahavita fitsaboana feno ianao ary tsy misy fiantraikany amin'ny antony ara-pahasalamana momba ny fitondra milomano. Faharoa, ilaina ny manaraka ny fitsipika fototra momba ny fahadiovana - aoka ho azo antoka ny fandroana alohan'ny aorian'ny fandroana, ary aza mampiasa menaka sy akora aromatika matanjaka.
Mifanaraka amin'ny fitsipika fototra amin'ny fitondran-tena ao amin'ny dobo, ny kilasinao dia tsy hitondra soa ho an'ny fahasalamana, fa hitondra fahafinaretana ihany koa.
Fitness ao an-trano
Farajiana mody amin'ny vanim-potoana: niposaka ny fitoeran-jiro, izay ny rehetra dia adala
Ny fihinanana metabolika ho an'ny fahaverezan'ny lanja - famaritana amin'ny antsipiriany, ny tombontsoa sy ny vokatra
Takona mitsangana miaraka amin'ny fanontana sary
Dresses with Train 2013
Ambasadin'i Danemarka ao Kazakhstan
Trondro mena ao anaty lafaoro - sakafo tsara indrindra ho an'ny sakafo tsotra sy tena izy
Trondro fotsy - votoatin'ny kalorie
Elektrika mpanadio lamba
Tafiditra ao amin'ny kindergarten
Sakafo misy tantely - tsara sy ratsy
Ny sakafo tsy misy gluten ny fatiantoka